Owayengumphathi wezokuvakasha eVancouver ukubhekana nengqungquthela yemininingwane eVanuatu
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » izinhlangano » Owayengumphathi wezokuvakasha eVancouver ukubhekana nengqungquthela yemininingwane eVanuatu
Isethulo Ingqungquthela yePacific Tourism Insights (I-PTIC), ezoba sePort Vila, eVanuatu ngoLwesithathu, mhla zingama-25 kuMfumfu, izobhekana namathuba abalulekile nezinselelo ezibhekene nezinhlangano zezokuvakasha zomphakathi nezizimele kulesi sifunda.
Ihlelwe futhi yasetshenziswa ngabakwa I-Pacific Asia Travel Association (PATA) ngokubambisana ne Inhlangano Yezokuvakasha yaseNingizimu Pacific (SPTO) kanye ne- Ihhovisi lezokuvakasha eVanuatu (VTO) ingqungquthela ivula ngenkulumo eyisihluthulelo 'yokucabanga kwesonto elikhulu' evela ku-Rick Antonson, umbhali kanye nowayeyi-CEO ye-Tourism Vancouver.
Uhlelo lwengqungquthela, oluhlukaniswe amaseshini amahlanu, luphinde luhlanganise nezethulo ezivela kochwepheshe bezokuvakasha bamazwe ngamazwe kanye nabaholi bemicabango okuhlanganisa noDkt Mathew McDougal (CEO - Digital Jungle); U-Sarah Mathews (uSihlalo we-PATA kanye neNhloko Yezokumaketha Kwendawo Ye-APAC kwa-TripAdvisor); Stewart Moore (CEO – EarthCheck); kanye noCarolyn Childs (Umqondisi – I-MyTravelResearch.com) ozobe enza isethulo sakhe ngevidiyo. Ingqungquthela isekelwa yi-BBC World News njengoba zombili izingxoxo zephaneli zenganyelwe yintatheli yamazwe omhlaba uPhil Mercer.
UMqondisi Wesifunda we-PATA - uPacific Chris Flynn, oqhuba le ngqungquthela, uthe, “Sibheke ngabomvu ukwamukela ongqongqoshe bezokuvakasha kulesi sifunda kulokho esikholelwa ukuthi kuzoba yingqophamlando eVanuatu kanye neSouth Pacific Tourism Organisation. Kwakuwumbono omangalisayo wochwepheshe bemboni yezokuvakasha abasebenza ePacific cishe eminyakeni engama-70 edlule owaholela ekwakhekeni kwe-PATA. Le ngqungquthela yokuqala ikhombisa ukuzimisela kwethu ukuqhubeka nokweseka imboni yezokuvakasha yalesi sifunda ngokubambisana nabalingani bethu besifunda.”
Izithunywa zizozwa amazwi okwamukela avela kubo bobabili uSihlalo we-SPTO u-Sonja Hunter kanye noSihlalo we-PATA u-Sarah Matthews, okulandelwa yinkulumo yokuvula evela kuMhlonishwa. UJoe Yhakowaie Natuman, iPhini likaNdunankulu waseVanuatu kanye noNgqongqoshe Wezokuvakasha.
Amazwi okuvala azokhulunywa nguDkt. Mario Hardy, isikhulu se-PATA. Ikheli lokuvala lizonikezwa uChristopher Cocker, oyi-CEO ye-SPTO.
Imininingwane eyengeziwe: https://www.pata.org/event/ptic-2017/
I-Lufthansa Group ihambisa umqondo wokusungula i-Alitalia ehlelwe kabusha
Ukuvulwa Kwehhotela: Ihhotela elisha laseCanberra iMantra MacArthur
Inhlangano yezokuvakasha yaseCaribbean imemezele okusha...
Kuthembisa Ukwelashwa Okusha Komugqa Wokuqala Kwe-Gastric...
I-Homestead, i-Hot Springs, i-Virginia: Ukunethezeka kanye...